I-10 yamanani esenzo seWWE sanamhlanje - Wwe
I-10 yamanani esenzo seWWE sanamhlanje
Ndinesivumo endimele ukusenza. Phantse kwiminyaka engama-40 ubudala, ndinengqokelela enkulu yokudlala. Nangona kunjalo, ingqokelela yam ayibandakanyi imipu ye-nerf, iilego okanye amavili ashushu. Ingqokelela yam iqulethe malunga nama-2 500 amanani ezenzo zokulwa.
Ndiye ndaqokelela amanani esenzo ukusukela xa ndandineminyaka esixhenxe ubudala. Kule minyaka idlulileyo, ndiye ndafumana into emangalisayo. Ndisenamanani amadala kaHasbro kunye neJakks Pacific kumashumi eminyaka eyadlulayo, kodwa ndikwaqokelela amanani amaninzi kaMatel anamhlanje.
Ngelixa ixabiso eliyinyani lemali lilele kumanani amadala ukusuka kwiminyaka yama-80's ukuya kwangoko, kubalulekile ukuqonda ukuba uMattel uwunyusile umdlalo wabo kunye namanqaku amatsha anamhlanje, ekufanele ukuba utyale imali kuwo, ukuba ungumqokeleli.
Kutshanje ndiye ndahlala phantsi ndaza ndajonga amanani esenzo seWWE samva nje, ndikhangela ezona zintengiso zishushu, kufuneka-ndinamanani okwangoku kwintengiso. Emva kweentsuku ezininzi zophando, ndiye ndeza nolu luhlu lulandelayo lwe-10 yamanani amanyathelo e-WWE ekufuneka ucinge ngokuthenga. Nanku ukujonga ezona zibalo zamanje zeWWE.
# 10 iRusty Rhodes: UMatel Summerslam 2017
Ndiyabona ukuba iSapphire iyancuma ngoku!
Uliphupha laseMelika kwaye ngelixa emkile emzimbeni, umoya wakhe kunye nelifa lakhe uya kuphila ngonaphakade.
UMattel unkqonkqoze lo ngaphandle kwepaki. Olu luthotho lweMattel Summerslam lwamva nje, olubiza kuphela malunga ne-10 yeerandi kwiivenkile zakho zasekuhlaleni. Eli nani linemikhono emikhulu ye-Dusty emnyama eneepolka ezityheli, kunye neebhutsi zeenkomo ezidumileyo. Amanani ade abe nophawu lokuzalwa kwisisu esikhulu se-ol!
ukwenza uthando kumntu omthandayo
ilitye elibandayo lesteve ukungena kwe-austin
Ndiyakholelwa ukuba umhlaba ufuna okhethekileyo
I-brock lesnar yelinye iqela kwi-summerslam 2016
Ithetha ukuthini xa uthatha umntu ngokungakhathali
uthini ukuba intombazana iyakuthanda